मेसोजोइक युग: सबै कुरा तपाईंले जान्नु पर्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
उहाँसँग सम्बन्धित सबै कुरा देखिसकेपछि प्रेस्याम्ब्रिअन, हामी यात्राको क्रममा अगाडि बढ्छौं मेसोजोइक को दिशानिर्देश अनुसरण गर्दै भौगोलिक समयमेसोोजिक डायनासोरको युगको रूपमा चिनिन्छ। यसमा तीन अवधिहरू ट्रायसिक, जुरासिक र क्रेटासियस समावेश छन्। यस युगको दौरान, हाम्रो ग्रह पृथ्वीमा असंख्य घटनाहरू घट्यो जुन हामी यस पोष्टभरि विस्तारसँग हेर्नेछौं।
के तपाई मेसोजोइकमा भएको सबै कुरा जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईंले भर्खर पढिरहनु पर्छ।
2 सरीसृपहरू र डायनासोरहरू
3 ट्रायसिक अवधि
4 जुरासिक अवधि
5 Cretaceous अवधि
मेसोजोइक लगभग बीचमा भयो २245 मिलियन वर्षहरू र 65 XNUMX मिलियन वर्ष पहिलेसम्म चले। यो युग कूल १ 180० मिलियन वर्षको हो। यस समयमा क्रमशः विकास गरीयो, विविधीकरण गरियो, र पृथ्वीमा सबै स्थानहरू जित्यो।
पाँच इन्द्रियको विकासलाई धन्यवाद, पदार्थको विकासको नयाँ अभिव्यक्ति सिर्जना हुन थाल्यो। यससँगै अंगहरूको विकास एक महान विकासवादी चरणको रूपमा सुरू हुन्छ। मस्तिष्क अ is्ग हो जुन इतिहासको सब भन्दा बढि विकास प्रस्ताव गर्दछ।
कोषहरूको केन्द्रक सबै जानकारीको समन्वय र स्वागत केन्द्र हुन्छ। यो कोशिकाको दिमाग हो, तर यो माछा मा दिमाग को कुरा गर्न थालेको छ। यस समयमा उभयचर, सरीसृप, चरा र स्तनपायी प्राणीहरूको क्रमिक विकासहरू भइरहेका छन् जुन मस्तिष्क विकास गर्दैछ र सूचनाको अधिक मात्रामा ह्यान्डल गर्न प्रशिक्षण दिन्छ।
यस युगमा महाद्वीप र टापुहरू जुन पेन्जेआमा भेला भएका थिए उनीहरूको उपस्थिति अलि अलि लिन थाल्छ। ठूला orogenic आन्दोलनहरू हुँदैन र मौसम सामान्यतया स्थिर, तातो र आर्द्र छ। यही कारण हो कि सरीसृपहरू डायनासोरको बिन्दुमा एक असाधारण विकास भयो। यी जनावरहरूको आकार विशाल थियो र तिनीहरूको प्रशस्तताका कारण मेसोजोइकलाई सरीसृपको युग पनि भनिन्छ।
सरीसृपहरू र डायनासोरहरू
केही सरीसृपहरूले उडान गर्न सिके। यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि, सबै युग र कालहरूमा जस्तै, त्यहाँ पशुहरूको ठूलो समूहको लोप भएको थियो ट्राईलोबाइट्स, ग्रेपटोलाइट्स र बख्तरबारी माछा।
अर्कोतर्फ, वनस्पति र जीवहरू नविकरण गरिएको थियो। जिमोस्पर्महरू देखा परे (भास्कुलर बोटबिरुवाहरू हुन्छन् जसले बीज उत्पादन गर्दछन् तर फूलहरूको अभाव छ)। यी बोटहरूले फर्नहरूलाई विस्थापित गरे। युगको अन्त्यमा, एंजियोस्पर्म भनिने बोटबिरुवा देखा पर्‍यो। तिनीहरू सबैभन्दा विकसित भएको भास्कुलर बिरुवाहरू हुन् जसमा अण्डाशय र यसमा बन्द बीजहरू छन्। थप रूपमा, तिनीहरूसँग फूल र फलहरू छन्।
यस महान क्रान्तिकारी छलांगले पशुको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो, किनकि बोटबिरुवाहरू उनीहरूका धेरैजनाका लागि खाना र निर्वाहको मुख्य स्रोत हुन्। एंजियोस्पर्महरू पनि मानवको लागि वातानुकूलक तत्वहरू हुन्, किनकि विश्वभरिका फसलहरूको अधिकांश भाग तिनीहरूबाट नै आउँदछ।
ठूलाहरू सरीसृपहरू वा पनि भनिन्छ डायनासोरहरूले पृथ्वी र हावामा प्रभुत्व जमाए लाखौं वर्ष को लागी। तिनीहरू सब भन्दा विकसित जनावरहरू थिए। यसको अन्त मेसोजोइकको अन्तिम विलुप्तिको साथ आयो। यस जन लोपको समयमा, invertebrates को ठूलो समूह गायब।
हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, मेसोजोइक युगलाई तीन कालक्रममा विभाजन गरिएको छ: ट्रायसिक, जुरासिक र क्रेटासियस। आउनुहोस्, ती सबैलाई विस्तृत रूपमा हेरौं।
ठाँउ लगभग राखियो २245 देखि २१213 मिलियन वर्ष। यस अवधिमा पहिलो अमोनोइडहरू जन्मिएका थिए। डायनासोरहरू देखा पर्दै थिए र विविधता देखाईरहेका थिए। करीव २ 230० वर्ष पहिले, सरीसृप हिप्स सब भन्दा द्रुत दौडको लागि अनुकूल हुन सक्षम थिए। थप रूपमा, करिब २०205 मिलियन वर्ष पहिले पहिलो pterosaurs (फ्लाइंग सरीसृप) देखा पर्‍यो।
ट्रायसिकले पहिलो साँचो स्तनपायी प्राणी र पहिलो चराहरूको उपस्थितिलाई चिह्नित गर्दछ। चराहरू मांसाहारी, प्रकाश, द्विपदीय डायनासोरहरूबाट उत्पन्न भयो। डायनासोरहरू हावामा प्रक्षेपण गर्न र वायु वातावरणलाई जित्न सक्षम भए। यसको लागि, अग्रभागहरू बिस्तारै उडानको लागि पखेटामा परिणत भयो र पछाडि पातलो र हल्का भयो।
अर्कोतर्फ, उनको शरीर सुरक्षात्मक र जलरोधक प्वाँखले ढाकिएको थियो र बिस्तारै सानो र हल्का भयो। उसको सम्पूर्ण जीव अधिक वा कम लामो उडानहरूको लागि अनुकूलित गरियो।
भूमि को रूप मा, सब भन्दा प्रशस्त रूखहरू सदाबहार थिए, प्राय: कन्फिफर र ginkgos। हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, ट्रायसिकको समयमा, Pangea दुई ​​सुपरकन्टिनेन्टहरुमा विभाजित भयो जसलाई लौरासिया र गोंडवाना भनिन्छ।
जुरासिक अवधि लगभग भयो २213 देखि २१144 मिलियन वर्ष। तपाईं फिल्महरूमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो डायनासोरहरूको सुनौलो युग थियो। यो किनभने मौसम एकदम तातो र आर्द्र छ र यसको विकासको पक्षमा छ। विपुल बोटबिरुवाको बृद्धि र यसको विस्तारलाई पनि मनपर्‍यो।
महाद्वीपहरू अलग भएपछि समुद्रहरू बढ्न थाले र समुद्री जलराष्ट्रिय समुद्री जल क्षेत्रहरू युरोप र अन्य भू-भागहरूमा फैलियो। जुरासिकको अन्त्यसम्ममा यी समुद्रहरू सुक्न थाले र यसले कोरल चट्टान र समुद्री इन्भर्टेब्रेट्सबाट आएका चुनढुंगाको ढु rock्गाको ठूलो भण्डार छोडे।
जमिनको भाग डायनासोरहरूको हावी थियो, जबकि समुद्री डाइनोसोरहरूको संख्या बढ्यो इचिथियोसोरहरू र plesiosaurs जस्तै। हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, डायनासोरहरू सबै तीन सम्भावित माध्यमहरू फैलाउन सक्षम थिए। यस अवधिभर स्तनपायी साना नै रहे। कोरलहरू जो चट्टानहरू बनाउँदछन् समुद्री किनारको थोरै पानीमा हुर्कियो।
क्रेटासियस लगभग भयो १145 देखि million 65 मिलियन वर्ष। यो समयावधि हो कि मेसोोजिकको अन्त्य र सुरुको संकेत गर्दछ Cenozoic। यस अवधिमा जीवित प्राणीहरूको एक ठूलो जन लोप हुन्छ जसमा डायनासोरहरू हराउँदछन् र सबै invertebrates को 75%। एक नयाँ विकास फूल फुल्ने बिरुवाहरु, स्तनपायी र चराहरु को लागी शुरू हुन्छ।
वैज्ञानिकहरू लोप हुने कारणहरूको बारेमा अनुमान लगाउँछन्। सबैभन्दा व्यापक सिद्धान्त यो हो कि यस अवधिमा भइरहेको मौसम, वातावरण र गुरुत्वाकर्षणमा परिवर्तनहरू थपियो युकाटान प्रायद्वीपमा ठूलो उल्का पिण्डको पतन। यस उल्का पिण्डले पृथ्वीको बस्ने अवस्थालाई ठूलो परिवर्तन गर्‍यो र नयाँ सर्तहरूमा अनुकूलताको कमीको कारण विलुप्त भयो। यस कारणले पृथ्वीको विकास लाइनले चराहरू र स्तनपायी प्राणीहरूको विविधिकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो।
यो जानकारीको साथ तपाईं मेसोजोइकको बारेमा बढि जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » मेसोजोइक युग: सबै कुरा तपाईंले जान्नु आवश्यक छ
मउरो न्युमेन भन्यो
धेरै, धेरै रोचक प्रत्येक युग र अवधि को विस्तृत र स्पष्ट जानकारी, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद!
मउरो न्युमेनलाई जवाफ दिनुहोस्
प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धान्त